आफ्नो कम्प्युटर कसले प्रयोग गर्यो कसरी थाहा पाउने ? ~ Khabardari.com
आफ्नो कम्प्युटर कसले प्रयोग गर्यो कसरी थाहा पाउने ?
6:20 PM Admin 1 comment
कहिले प्रयोग भयो ? सम्भवत यो सवैजसो कम्प्युटर प्रयोगकर्ताको चासो र चिन्ताको बिषय हो । किनकी अहिलेको जमानामा कम्प्युटर नै एउटा ब्यक्तिको सम्पूर्ण सूचना भण्डार र सम्पत्ति हो ।
त्यही कम्प्युरटमा महत्वपूर्ण कागजात र सूचनाहरु राखिएका हुन्छन, प्रयोगकर्ता के गरिरहेको र के गर्ने योजना बनाइरहेको भन्ने पनि यहींबाट थाहा हुन्छ । ब्यक्तिगत कम्प्युटर उसको पर्स भन्दा पनि महत्वपूर्ण चीज हो भन्दा फरक नपर्ला ।
त्यसैले तपाईको कम्प्युटर पछिल्लोपटक कहिले प्रयोग गरियो भन्ने सूचनाले त्यो कसले प्रयोग ग¥यो र आफ्ना सूचनाहरु कसले थाहा पाइराखेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ ।
यदि तपाईको घरमा केटाकेटीहरु छन र उनीहरुले रातीको समयमा कम्प्युटरमा खेलेर बिताउने सम्भावना छ भने अन्तिमपटक प्रयोग कतिखेर भयो भन्ने सूचनाले तपाईलाई झनै सहयोग गर्ने छ ।
त्यसैले आज हामी तपाईलाई केही यस्ता सरल बिधिहरु बताउँदैछौं जसको सहयोगमा तपाई कुशल प्राबिधिक नभई पनि आफ्नो कम्प्युटर पछिल्लोपटक कतिखेर प्रयोग भयो भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।
December 24, 2014 at 1:32 PM Reply
यो रिसेन्ट प्लेसस कसरी लेख्ने ?? plzz tell me spelling!! :(